Izindaba - Ingakanani intengo yendwangu yebhokisi elikhanyayo le-3M
Ingakanani intengo yendwangu yebhokisi elikhanyayo le-3M
Kubangani abafuna ukwenza izimpawu zendwangu yebhokisi elikhanyayo le-3M, okukhathazeka kakhulu yinani, malini imitha lesikwele, uma lidlula isabelomali sabo, noma uma ikhwalithi yinhle, kufanele banqikaze ukuyisebenzisa. Kodwa-ke, uma ubuza inani elingalungile, eliholela ekushiyekeni ukusetshenziswa kwezinto ze-3M, ingabe kuyadabukisa?
Ngakho-ke, kufanele sazi izizathu zokwehluka kwamanani amakhulu kwefilimu yendwangu yebhokisi elikhanyayo le-3M.
Indwangu ye-3M engaphansi, enokuthungwa okuthambile, ukuqina okuncane, amandla wezinyembezi aphansi, futhi akukho mehluko ekuzizweni ngesandla ngendwangu ejwayelekile yebhokisi elikhanyayo. Indwangu yebhokisi elikhanyayo eyi-3M izwa iqinile futhi iyajiya uma iphethwe ngesandla sakho.
isikhathi sokusebenzisa sihluke kakhulu
Uma kuqhathaniswa nenani lendwangu yangempela yebhokisi elikhanyayo le-3M, ezingaphansi zishibhile kakhulu, kepha impilo yesevisi nayo yehluke kakhulu. Umkhiqizo wangempela unewaranti yeminyaka emithathu, kepha ungasetshenziswa iminyaka emi-4 kuye kwemihlanu, kuyilapho izindwangu ezisezingeni eliphansi zingenaso isiqinisekiso sekhwalithi. Uma unenhlanhla, zingasetshenziswa iminyaka emi-3. Uma ikhwalithi iba yimbi kakhulu, kuzoba iminyaka emi-2 kuphela.
maqondana nomphumela wokukhanyisa, umphumela wawumuhle ekuqaleni, kepha ngemuva kwesikhashana, indwangu engaphansi kwe-3M izokwembulwa
Futhi, intengo yendwangu yebhokisi elikhanyayo le-3M imvamisa isukela kumashumi wamadola, futhi intengo ihlukaniswe yaba iwaranti yeminyaka emi-3 newaranti yeminyaka emi-5. Ngokuyisisekelo, iwaranti yeminyaka emi-5 ibiza ngokuphindwe kabili kunewaranti yeminyaka emithathu. Amaphuzu abalulekile wokukhonjwa kwekhwalithi kwendwangu yebhokisi elikhanyayo le-3M: ukujiya, ukuqina, ukuqina, ukumelana nesimo sezulu, ukudluliswa kokukhanya, ukugoqeka kwelangabi, iziqu zokuxebuka, ukubabazeka, njengokufakwa kwe-inki, ukukhiqizwa kabusha kombala, njll.
Okokuphrinta kwe-inkjet. Indwangu yebhokisi elikhanyayo le-3M ihlukaniswe ngezinhlobo ezintathu ngokwenqubo yokukhiqiza: indwangu yebhokisi elikhanyayo lommese, indwangu yebhokisi ekhanyayo nokunamathisela indwangu yebhokisi elikhanyayo elisemthethweni.
Njengoba kushiwo ngenhla, indwangu esezingeni eliphansi ithambile futhi inokumelana nezinyembezi okuphansi, ngakho-ke ayikwazi ukumelana namakhaza angaphandle nomoya onamandla. Umoya onamandla uvame ukushaya, futhi isithombe sihamba sibuyele emuva naphambili, futhi i-ductility ayisihle, okwenza isithombe singalingani.
Isikhathi Iposi: Apr-12-2021